A ga-ekwuputa Amazon Prime maka Apple TV na-esote WWDC | Esi m mac
Ndị ọrụ Amazon Prime nọ na ihu ọma. Karịsịa ma ọ bụrụ na ha nwere ọgbọ Apple Apple nke 4 n'otu oge ahụ. Fewbọchị ole na ole gara aga, onye ọrụ ibe anyị bụ José Alfocea gwara anyị nke ahụ Amazon Prime nwere ike ịbịa Apple TV, oge ọkọchị. Ugbu a Buzzfeed, Ọ na-ekwu maka nkwekọrịta dị n'etiti ndị abụọ ahụ. Amụma ekwuputara ọkwa a na ogbako ndị nrụpụta ọzọ ga - eme na mbido June. Otú ọ dị, ngwa ga-adi na ngwụcha oge ọkọchị. Ruo oge ahụ, anyị ga-enwe afọ ojuju n'ịhụ nchịkọta ọdịnaya site na iPhone, iPad ma ọ bụ ihe nchọgharị Mac anyị.
Ndị dike abụọ a atụlee ike ha ebe ọ bụ na Amazon kwụsịrị ire ụlọ ahịa ya n'ịntanetị, ọgbọ Apple nke anọ, na 2015. Ihe kpatara Amazon bụ na Apple ekweghị itinye Amazon Prime ngwa na Apple TV. N'oge ahụ a nụrụ ya na Amazon nwere ike nwee mmasị ịhapụ ihe ọkpụkpọ ọdịnaya, n'ụdị Apple TV. N'oge ahụ, Apple emeghị ka ihe dịrị ya nfe site na ịchọ nnukwu ego ịkwụ ụgwọ maka ịnwe ngwa ya na ngwaọrụ multimedia apple.
Ihe dị ka agbanweela ma Amazon ga-ere Apple ngwaọrụ na ụlọ ahịa ya dị n'ịntanetị.
Dịka akụkụ nke nkwekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ, Amazon - nke kwụsịrị ire Apple TV ngwaọrụ afọ abụọ gara aga, mgbe amachibidoro Google Chromecast ngwaọrụ n'ụlọ ahịa ya n'ịntanetị - ga-ebido ire Apple TV.
Amaghị ụbọchị a kara aka maka nloghachi nke Apple TV na ụlọ ahịa Amazon.
Ya mere, ndị nwere mmasị, Anyị ga-echere na Mọnde na-abịa, June 5, maka nkọwa ndị ọzọ, yana ngosi ngosi a tụrụ anya nke MacOS 10.13 na akụkọ dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Amazon Prime ga-ekwuwapụta maka Apple TV na WWDC ọzọ